Isisombululo - Shanghai Weyer Electric Co., Ltd.
I-Weyer PA6 okanye i-PA12 conduits kunye nezixhobo zayo ezinxulumene ne-WQG, WQGM, WQGDM zisetyenziswa kakhulu kumzi mveliso kaloliwe. Ezi mveliso zineempawu ezifanelekileyo zokulwa nomlilo, ngaphandle kwe-halogen, i-phosphor kunye ne-cadmium. Baye baqinisekiswa umgangatho waseYurophu nakwamanye amazwe ngomlilo kunye nomsi, EN45545-2, R22 / R23.
Enye yeemarike zethu eziphambili ikheshi. Kule minyaka, ishishini lekheshi likhule ngokukhawuleza. I-Weyer tubing kunye ne-gland ye-cable gland idlala indima yokukhusela kule shishini. Zichasene nomlilo, ukuguga okulwa nobushushu, ezine-IP68 ezilungileyo okanye ukhuseleko lwe-IP69k. Sizuze igama eliphezulu kumthengi ikheshi ekhaya nakumazwe aphesheya.
Izithuthi zamandla amatsha
Kwiminyaka emihlanu edlulileyo, izithuthi zamandla amatsha zazisasazeke e China. Sibancedile abo bathengi bayila isisombululo sonke sokhuseleko. I-Weyer ekhethekileyo ye-EMC yamadlala kunye nezihlanganisi ze-M23 zamkelwe kwaye zasetyenziswa ngokupheleleyo. Ngoku sithatha inxaxheba kuyilo lweprojekthi yamanye amazwe yale ndawo.
Amandla ahlaziyekayo asetyenziswa ngokubanzi kwihlabathi, iprojekthi yamandla omoya icela isisombululo esiphezulu sokhuseleko. I-Weyer ephezulu yoxinzelelo lwe-tubing kunye ne-cable gland inokuhlangabezana nenqanaba elifanayo leprojekthi. Imijelo yethu, amadlala afakelwe kumvelisi, kwibhokisi yolawulo lobushushu, Isantya esitshintshayo kunye nomzimba wenqaba.
Inkqubo yokukhusela i-Weyer efana nemijelo kunye nazo zonke iintlobo zezihlanganisi ezinomsonto zikhusela uhlobo ngalunye lomatshini kolu shishino. Iimveliso zethu zisetyenziswa kakhulu kwiPort Facility, umatshini wecuba, umatshini wenaliti, umatshini woomatshini, kunye nesixhobo somatshini njl.
Ukukhanya kwemizi-mveliso kukwashishini lethu elibalulekileyo esibandakanyekayo kulo. Iimveliso zikaWeyer ziyanelisa uninzi lwabathengi bethu kwindawo ezahlukeneyo zokusebenzisa iZibane. Siyile iimveliso ezizodwa ezinje ngemijikelezo yeqondo lobushushu ephezulu kunye namadlala, iimveliso ezichasene nomlilo zeV0 kunye neetyhubhu zokuguga ngobushushu ngokwe-OC esemgangathweni / T29106
Inkqubo yokukhusela i-Weyer ayisebenzisi kuphela kwiindawo zokuhlangana zombane, kodwa nakwiimveliso ezininzi ezizenzekelayo kunye neerobhothi. Uluhlu olupheleleyo kwii-conduits kunye nezihlanganisi zinokuhlangabezana neemfuno zeshishini ngalinye. Amadlala ethu aphumelele isiqinisekiso se-ATEX kunye ne-IECEx kwindawo enobungozi.
Ngoku lixesha le5G. Siyawagcina amaxesha. I-Weyer polyamide tubing kunye ne-gland ye-air gland inokuhlangabezana neemfuno zeeprojekthi zonxibelelwano. Iindawo zethu zinokugcina ukuhamba komoya okuphezulu ukulinganisa umoya oshushu kunye nomoya obandayo ngaphakathi okanye ngaphandle kwebhokisi kwaye unokukhusela iintambo ngokuchasene namanzi nothuli (IP67).